Barcelona Oo Waji Gabax Kala Kulantay Laba Ka Mid Ah SADDEX Ciyaartoy Oo Ay U Doonaysay Beddelka Luis Suarez Iyo Doorashada Kaliya Ee Ay Haystaan - Gool24.Net
Barcelona Oo Waji Gabax Kala Kulantay Laba Ka Mid Ah SADDEX Ciyaartoy Oo Ay U Doonaysay Beddelka Luis Suarez Iyo Doorashada Kaliya Ee Ay Haystaan
January 22, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Barcelona ayaa ku mashquulsan buuxinta booska uu ka dhaawacmay weeraryahanka Luis Suarez oo aan usoo laaban doonin inta ka hadhay xili ciyaareedka, waxaana tababare Quie Setien uu qiray in ay ku jiraan hawsha helidda laacibkii u buuxin lahaa booskaas.
Toban maalmood oo kaliya ayay u haystaa Barcelona inay lasoo saxeexato weeraryahan la qabsan kara oo leh tayadii Saurez mid ku dhow, waxaanay calaamadsadeen saddex laacib oo laba ka mid ah ay markiiba kala kulmeen waji gabax.
Weeraryahanka Arsenal ee Piere-Emerick Aubameyang iyo dhaliyaha RB Leipzing ee Timo Werder oo kusoo baxay liiska ciyaartoyga ay Barcelona doonayso ayaa markiiba ay ka heshay jawaabo adag, waxaana dhawaaqii ugu horreeyey uu kasoo yeedhay Arsenal oo u sheegtay in aanay sinaba u dhici karin in ay fasaxdo dhaliyaheeda waqtigan.
Sidaas oo kalena, RB Leipzing ayaa tibaaxday in aanay ogolayn in ay lumiso ciyaartoy ay ku tiirsan tahay xilli ay u baahan tahay inay horyaalka Bundesliga ku tartanto.
Doorashada kaliya ee usoo hadhay Barcelona waxa uu noqday weeraryahanka Valencia ee Rodrigo oo isagana qiime lacageed oo waalli ah ay kooxdiisu ku doonayso, taas oo Barcelona ku ah madax-xanuun cusub.
Sida uu qoray wargeyska Marca, Valencia waxay doonaysaa in ugu yaraan ay Barcelona miiska usoo saarto lacag dhan 60 milyan oo Euro, laakiin kooxda reer Catalonia way ku adag tahay inay xilligan bixiso lacagta intaas le’eg maadaama ay xagaagii 124 milyan ku kharash garaysay ciyaartooyo ay soo iibsatay.
Dhinaca kale, wargeysku waxa uu xusay in maamulka Barcelona ay iska ilaalinayaan inay mar kale ku celiyaan qaladkii ay sameeyeen waqtigan oo kale sannadkii hore markaas oo ay amaah kusoo qaateen Kevin-Prince Boateng oo lix bilood ay lasoo saxeexdeen, hase yeeshee uu la qabsan waayay kooxdaa.
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona waxa ka go’an inay hesho weeraryahan si rasmi ah ugu soo biira, taasina waxay u baahan tahay inay u hurto lacag.